'Scream' Trailer dia fiverenana mahafinaritra any amin'ny Slasher Franchise - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Scream' Trailer dia fiverenana mahafinaritra any amin'ny Francais Slasher
Hiverina avy hatrany aho ....
by Trey Hilburn III Oktobra 12, 2021
by Trey Hilburn III Oktobra 12, 2021 18,521 hevitra
Inona ny sarimihetsika mampatahotra tianao? Mety ho ilay sarimihetsika Scream vaovao ity. Ny fahadimy amin'ny franchise no voalohany tsy misy an'i Wes Craven ao anaty sambo, fa manome voninahitra an'ity mpanatontosa sarimihetsika malaza ity… ary hita izany.
Hita fa ny Directeur, Matt Bettinelli-Olpin ary Tyler Gillett no tovolahy mety tanteraka amin'ny asa fametrahana niantsoantso miverina amin'ny tongony. Sarimihetsika nataon'izy ireo Vonona na tsy dia fipoahana sy fitaratra mitovy amin'ny angovo mitovy amin'ny hitantsika amin'ny teaser.
Mbola manana fomba vitsivitsy handehanana mandra-pamoahana ilay sarimihetsika (Janoary 2022), saingy ity dia somary mahafinaritra ihany niantsoantso manondraka antsika. Manome izay tena ilain'ny mpankafy azy ireo hialana amin'ny sisa amin'ny dia.
Ny synopsis ho an'ny niantsoantso mandeha toy izao:
"Ny horonantsary dia manaraka ny tantaran'ny tovovavy iray izay niverina tany amin'ny tanindrazany taloha, nefa sendra tranga famonoana olona nahatsiravina nifandray tamina mpamono olona malaza be nisaron-tava."
Ahoana ny hevitrao momba ny niantsoantso teaser? Faly ve ianao amin'ny zavatra hitanao? Faly ve ianao amin'ny tari-dalana? Ampahafantaro anay ny amin'ny Facebook ary Twitter fizarana fanehoan-kevitra.
niantsoantso miditra an-tsokosoko any amin'ny teatra amin'ny 14 Janoary 2022.